Igbo Mass Readings for December 2 2021,Tọọzde Izuụka nke Mbụ n'oge Adventi
December 7, 2021 December 1, 2021 by lectionary
2 Ihe Ọgụgụ nke mbụ – 26:1-6
3 ABỤỌMA NA AZỊZA – Ps: 118:1. 8-9.19-21.25-27.
5 OZIỌMA – 7:21.24-27
7 EKPERE ANATACHA ORIRI NSỌ
8 Igbo Mass Readings for December 2 2021, Tọọzde Izuụka nke Mbụ n’oge Olileanya Onye Nzọpụta anyị – Catholic Lectionary
Igbo Mass Readings for December 2 2021, Tọọzde Izuụka nke Mbụ n’oge Olileanya Onye Nzọpụta anyị
Nke a bụ Igbo Mass Readings maka December 2 2021, Tọọzde Izuụka nke Mbụ n’oge Olileanya Onye Nzọpụta anyị.
Igbo Mass Readings for December 2 2021, Tọọzde Izuụka nke Mbụ n’oge Adventi
Nna, anyị chọrọ enyemaka Gị. Zọpụta anyị na njọ ma dubata anyị na ndụ. Werekwa ike Gị nyere anyị aka. Site na Dinwenụ anyị Jesu Kristi …
Ihe Ọgụgụ nke mbụ – 26:1-6
Meghee ọnụ ụzọama, ka mba eziomume, mba nwere okwukwe bata. Ị na-eme ka o nwee udo zuru oke bụ onye ahụ nke obi ya dị n’ebe Ị nọ, n’ihi na ọ tụkwasịrị obi na gị.
Tụkwasanụ obi na Yahweh mgbe niile, n’ihina Yahweh Chineke bụ nkume mgbe ebighi ebi. N’ihina o butuola ndị bi n’ebe dị elu, n’ obodo dị elu.
O wedaala ya, tọgbọ ya n’ala, tụrụọ ya n’aja. Ụkwụ ga-azọpịa ya, ụkwụ ndị ogbenye na nzọ ụkwụ ndị a na emegbu emegbu.”
ABỤỌMA NA AZỊZA – Ps: 118:1. 8-9.19-21.25-27.
Azịza: Ngọzi dịrị onye ahụ na-abịa na-aha Onyenweanyị.
karịa ịtụkwasịobi n’ụmụ ndị eze. Azịza
Ị bụkwa onye nzọpụta m. Azịza
Ngọzi dịrị onye ahụ na-abịa n’aha Onyenweanyị,
anyị na-eto gị site n’ụlọ Onyenweanyị
Osebụrụwa bụ Chineke, o ji ihu ọchị ele anyị. Azịza
Chọọ Chineke mgbe ọ ga-ekwe nchọta, kpọkuo ya oge ọ nọ nso.
OZIỌMA – 7:21.24-27
Jesu gwara ndị na-eso ụzọ ya sị: “Ọ bụghị onye ọbụla nke na-akpọ m ‘Dinwenụ, Dinwenụ ga-aba n’alaeze eluigwe, kama ọ bụ onye na eme uche nke Nna m bi n’igwe.
“Onye ọbụla nke na-anụ okwu m ndị a, na emekwa ha, dịka nwoke maara ihe, nke rụrụ ụlọ ya n’elu okwute; mmiri wee zoo, ide mmiri tojuo, ifufe bukwara ya ma ọ daghị, n’ihi na a tọrọ ntọala ya n’elu okwute;
Onye ọbụla nke na-anụ okwu ndị a, ma ọ naghị eme ha, dịka onye nzuzu nke rụrụ ụlọ ya n’elu aja, mmiri zoro, ide mmiri tojuo, ifufe bukwara ya, o wee daa. Ọdịda nke ụlọ ahụ buru ibu nke ukwuu”.
Nna, site n’ihe niile I nyere anyị, anyị na-ehunyere Gị achịcha na mmanya nke a. Ebe anyị na-efe Gị ugbu a, nara onyinye anyị ma were nkwa ndụ ebighi ebi I kwere anyị gbaa anyị ume. Mezuoro anyị ihe ndị a site na Kristi Dinwenụ anyị. Amen.
Nna, mee ka orikọ anyị nke a kwalite n’ime anyị ịhụ ihe nke eluigwe n’anya. Meekwa ka nkwa na nchekwube di n’ime ya na-eduzi ụzọ anyị n’elu ụwa a. Anyị na-arịọ ihe ndị a site na Kristi Dinwenụ anyị. Amen
Igbo Mass Readings for December 1 2021, Wednezde Izuụka nke Mbụ n’oge Adventi
Igbo Mass Readings for December 2 2021, Tọọzde Izuụka nke Mbụ n’oge Olileanya Onye Nzọpụta anyị – Catholic Lectionary